करिडोर कुरेर कति दिन बस्नु ? – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक १४ गते १८:३९
करिब ३५ वर्ष लामो जीवनकाल स्वास्थ्य सेवामा रहेर बिताएँ । अवकाशका लागि केही महिना बाँकी थियो । आज मैले राजीनामा दिएपछि धेरै साथी तथा शुभेच्छुकले किन छाडेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले यसलाई मप्रतिको उहाँहरूको सद्भाव र शुभेच्छाकै रूपमा ग्रहण गरेको छु ।
आज मलाई राजीनामा दिँदै गर्दा कसैप्रति गुनासो छैन । यो मेरो पूर्ण स्वैच्छिक निर्णय हो । साढे ३ महिनाअघि बालस्वास्थ्य महाशाखाबाट मेरो जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा नै छोड्ने सोच बनाएको थिएँ । तर, साथी, सहकर्मी तथा मन्त्रीज्यूले पनि ‘अहिले मुलुक रूपान्तरणको भोकमा छ, केही योगदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यस्तो वेला छोडिनहाल’ भन्नुभयो ।
मेरो जागिरे जीवनमा पछिल्ला ३ महिना पीडादायी रहे । साढे ३ दशक सेवा गरेको मान्छे, जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र, महाशाखा सबै हाँकेँ, क्षमताले भ्याएसम्म काम गरेँ । तर, पछिल्ला ३ महिना मन्त्रालयको करिडोर सम्हालेजस्तै भयो । सहसचिवसरहको मान्छे, जिम्मेवारी छैन, हाजिर गर्यो, कुर्सी छैन, कसको कोठामा बस्ने ठाउँ खाली छ भनेर हिँड्नुपर्ने ?
बूढानीलकण्ठमा बस्छु, त्यहाँबाट गाडी चढेर आउनुपर्छ । हाजिर गर्यो, हिँड्यो । यसरी अपमानित भएर कति दिन बस्नु ?
११औँ तहका एक दर्जन सहसचिवले अहिले पनि मजसरी नै हाजिर गरेर दिन काटिरहनुपरेको छ । संघीयता आयो, केन्द्रमा संरचना घटाउनुपर्छ भन्ने नाममा हचुवामा अर्गानोग्राम बनाइएको छ । पहिले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता नबढाईकन यो ढंगले काम गर्न हुँदैनथ्यो ।
मुलुकले राम्रोका लागि संघीय संरचना रोजेको छ । नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना हचुवाका भरमा बनाइयो । बालस्वास्थ्य महाशाखा नै दुईवटा बनाउनुपर्ने अवस्थामा भएको महाशाखा पनि परिवार स्वास्थ्यमा गाभियो । ११औँ तहका एक दर्जन सहसचिवले अहिले पनि मजसरी नै हाजिर गरेर दिन काटिरहनुपरेको छ । संघीयता आयो, केन्द्रमा संरचना घटाउनुपर्छ भन्ने नाममा हचुवामा अर्गानोग्राम बनाइएको छ । पहिले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता नबढाईकन यो ढंगले काम गर्न हुँदैनथ्यो ।
अहिले स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक सबै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । हामीले गाई बनाउन खोजेको, गधा बन्यो । यो संस्थागत समस्या हो ।
म बाँकी अवधि पनि सिस्टमभित्रैबाट योगदान गर्न चाहन्थेँ होला, तर मिलेन । केही छैन, अब बाहिर रहेर पनि म नेपालकै जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन काम गर्छु ।